Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Magaalada Muqdisho (Daawo) – Idil News
Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Magaalada Muqdisho (Daawo)
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa si weyn Muqdisho ugu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku maqnaa dalka Turkiga.
Xildhibaanadii ugu badnaa ayaa soo dhaweeyay Gudoomiye Mursal xilli ay taagan xiisad ka dhalatay kala diristii uu sameeyay Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka.
Maxamed Mursal ayaa si kooban Saxaafadda ugu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida wanaagsan ee Garoonka Aadan Cadde Xildhibaanada & Gudoomiye Ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka ay ugu soo dhaweeyeen.
“Waad mahadsan tihiin soo dhaweyntiina Xildhibaanada Sharafta leh, waan idin kaga mahad celinayaa sida walaaltinimada ah ee aad ii soo dhaweyseen, wixii shaqo ah guri ayaan leenahay halkaasi ayaan uga hadleynaa, halkaan wax shaqo ah ugama hadleyno waad mahadsan tihiin soo dhaweyntiina.” Ayuu yiri Gudoomiye Mursal.
Soo dhoweyntan ayaa waxaa ka muuqatay dhoolatus iyo loolan u dhaxeeyay Xildhibaanada labada dhinac ee Baarlamaanka, kuwa taageersan Xukuumadda iyo kuwa ka soo horjeeda, waxaana laga dareemayay in labada dhinacba raadinayaan kalsoonida Guddoomiyaha.